Inovandudza Chigadzirwa IPX7 Isina Mvura Vibration Bullet 9 Inomhanyisa Remote
Ah wow ari kungozvipfupisa. Ndiri kufara kwazvo kuti ndakaraira chinhu ichi hachina kungouya kwandiri panguva yakakodzera chete asi chakasimudzirawo yekurara lil. Zviri nyore kwazvo kushandisa ini ndinoshamiswa pamatanho akasiyana e vibration uye murume wangu anoda kuishandisa pandiri. Inochinja-chinja uye ini ndinonyatsoda iwo ruvara rwakasimba asi kwete kungoomarara saka rinofamba nemuviri wangu uye ini ndoda iko kunzwa.
G garo Ndiro zita rakaringana nekuti iri ZVINOKOSHA kurova yangu lol. Ndinoshuva dai paive nezvimwe zvakaita saizvozvi ini ndaizoda kuwana zvimwe. Chinhu chega chirikushaikwa ndechekuti ndinofunga chingave chinotonhorera kana chikapenya murima kana kushandura mavara.
Ini handingatengese yangu yepasi rose ini ndazopedzisira ndawana toy ini nemurume wangu tinoda kushandisa. Zviri nyore kwazvo kuchenesa futi. Ndiri kufunga kuti ndinoda kuhodha matoyi akawanda kubva kukambani iyi uye mutengesi anoshamisa hazvibhadhare uye ruoko uye gumbo sematoyi mazhinji andakatambira kare
Chinhu It. TL-B03 Roketi
Tsanangudzo Basa rakagadziriswa waya isina waya
Mashoko ABS uye zvokurapa silicone
Ruvara Dema / Dzvuku, inogadziriswa
Pasuru Ruvara bhokisi kurongedza, inogadziriswa
Bhatiri Rechargeable li-bhatiri 3.7V / 200mAh
Nguva yekushanda 1.5h
Saizi 73mm (L) * 35mm (W) * 30mm (H)
Mamiriro 9 Kunyanyisa kudedera
Type Remote control anal anal butt plug varume bonde toyi
Max Ruzha Asingasviki 40dB
Kubhadhara T / T, Western Union uye Paypal
1.Anatomically Yakakwana Uye Aesthetically Yakanaka Mune Dhizaini 2.Roketi Bullet Yakagadzirwa kuti ienderane nechero Matoyi uye zvishongedzo
3.Powerful Motor uye rechargeable bhatiri 4.9 simba marongero anogona kununura shure arching clitoral uye kusangana nekutsi kwemukadzi cimaxes
5.Fast kuchaja kwemaawa emufaro
Pashure: Nyowani dhizaini isina waya pabonde toy toy mini vibrating mazai Clitoral vibrator massager bullet vibrator
isina waya inopfeka clitoral vakuru pabonde toy toy vakadzi ...
Simba revakadzi orgasm zamu masaji vibrators ...
Kupisa Kutengesa Chiremba TPE Big Penis Huge Realistic D ...
Vakadzi Postpartum Kudzorera Vagina Exercise Bonde T ...